RASMI: Leeds United Oo Si Weyn Iskugu Diyaarinaysa Premier League Iyo Valencia Oo Shaacisay In Xiddigeedii Rodrigo Moreno U Wareegay Elland Road - Gool24.Net
RASMI: Leeds United Oo Si Weyn Iskugu Diyaarinaysa Premier League Iyo Valencia Oo Shaacisay In Xiddigeedii Rodrigo Moreno U Wareegay Elland Road
Kooxda xamaasadda badan ee Leeds United oo 16 sannadood kaddib kusoo laabatay horyaalka Premier League, ayaa si weyn iskugu diyaarinaysa sidii ay wacdaro uga dhigi lahayd, sharaftii iyo karaamadeedii horena ay usoo ceshan lahayd.
Leeds United ayaa mashquul ku ah sidii ay uga soo adeegan lahayd suuqa iibka ciyaartoyga ee xagaagan, ayna ula soo saxeexn lahayd laacibiin ka caawin kara inay meelo wanaagsan kasoo gaadhaan amaba ugu yaraan ay ka badbaadaan inay dib ugu laabtaan halkii ay kasoo dallaceen ee heerka labaad.
Kooxdan jibbada iyo xamaasadda badan ay leeyihiin taageereyaasheedu, waxay si rasmi ah ula wareegtay weeraryahanka xulka qaranka Spain iyo Valencia ee Rodrigo Moreno, kaas oo qalinka ku duugay heshiis afar sannadood ah oo uu kaga ciyaari doono Elland Road.
Valencia ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxay ku shaacisay in gool-dhaliyaheeda Rodrigo uu Salaasadii ka mid noqday ciyaartoyda Leeds United, taas oo soo afjartay muddo lix sannadood ah oo uu ka ciyaarayay Mestalla Stadium.
“Valencia waxay heshiis hordhac ah la gaadhay Leeds United Salaasadii, kaas oo ay kula kala wareegayaan ciyaartoyga kubadda cagta ee Rodrigo Moreno, waxaana la dhamaystirayaa dhamaan macluumaadka, qaababka iyo baadhitaannada tijaabada caafimaadka.” Ayay Valencia ku tidhi war-saxaafadeed ay soo saartay.
Valencia waxay u mahad-celisay weeraryahankan reer Spain oo xili ciyaareedkii hore ku dhowaaday inuu uga wareego Barcelona.
“Valencia waxay uga mahad-celinaysaa dedaalka uu muujiyey lixdii xili ciyaareed ee uu joogay, isaga oo ciyaaray 220 kulan oo dhaliyey 59 gool, nagana caawiyey inaanu ku guuleysano hal koob. Valencia waxay rajaynaysaa wanaag oo dhan qaybta hadhay ee xirfaddiisa ciyaareed.” Ayay raacisay.
Waxa la aaminsan yahay in Leeds United ay ku iibsatay Rodrigo lacag dhan 30 milyan oo 10 ka mid ah ay ku xidhan yihiin bandhiggiisa ciyaareed, waxaanu ka hoos shaqayn doonaa Marcelo Bielsa oo ah tababaraha Leeds United.